1 Mpanjaka 10 - Ny Baiboly
1 Mpanjaka toko 10
Ny namangian'ny mpanjakavavin'i Sabà an'i Salomona - Ny haren'i Salomona.
1Nandre ny lazan'anaran'i Salomona amin'ny anaran'ny Tompo, ny mpanjakavavin'i Sabà, ka tamy hizaha toetra azy amin'ny ankamantatra. 2Dia tonga tany Jerosalema izy, narahin'ny kalesy maro be sy rameva nitondra zava-manitra, volamena sesehena, ary vatosoa. Dia nandroso ho any amin'i Salomona izy, dia nolazainy taminy izay rehetra tao am-pony. 3Voavalin'i Salomona avokoa ny fanontaniany, fa tsy nisy niafina tamin'ny mpanjaka, ka tsy hainy novaliana.
4Rahefa hitan'ity mpanjakavavin'i Sabà ny fahendren'i Salomona rehetra, ny trano nataony, 5ny sakafo teo ambony latabany, ny trano fitoeran'ny mpanompony, ny efitra amam-pitafian'ny mpiasa an-tranony mbamin'ny mpandroso divay ao aminy; ny ambaratonga fiakarany ho eo amin'ny tranon'ny Tompo, dia talanjona loatra izy, 6ka nilaza tamin'ny mpanjaka hoe: Hay va re, dia marina tokoa ny zavatra reko tany amin'ny taniko, ny amin'ny momba ny tenanao sy ny fahendrenao! 7Tsy nety nino ny lazan'olona aho, raha tsy efa tonga sy nahita maso, kanjo hay mbola tsy ampy antsasany akory no voalaza tamiko! Fa mihoatra lavitra noho ny reko tamin'ny filazan'olona ny fahendrena amam-boninahitrao. 8Sambatra ny olonao, sambatra ny mpanomponao, izay manoloana anao lalandava ka mandre ny fahendrenao. 9Hankalazaina anie Iaveh Andriamanitrao, izay mankasitraka anao, ka nametraka anao eo amin'ny seza fiandrianan'Israely. Fa fitiavany mandrakizay an'Israely no nametrahan'ny Tompo anao ho mpanjaka, mba hanome rariny ny olona sy hitsara azy marina. 10Dia notoloran-dravehivavy talenta volamena roapolo amby zato, zava-manitra be dia be ary vatosoa koa ny mpanjaka. Tsy nisy be noho ny nomen'ny mpanjakavavin'i Sabà an'i Salomona mpanjaka, intsony ny zava-manitra tonga.
11Ny sambon'i Hirama izay nitondra volamena avy any Ofira, dia nitondra hazo santala be dia be sy vatosoa koa avy any Ofira. 12ka nanaovan'ny mpanjaka arofanina tamin'ny tranon'ny Tompo sy amin'ny tranon'ny mpanjaka, ary harpa amam-baliha ho an'ny mpihira, ny hazo santala. Tsy nisy tonga intsony izany hazo santala izany, ary tsy nisy nahita izany intsony mandrak'androany.
13Dia mba nomen'i Salomona izay rehetra niriny sy nangatahiny kosa ny mpanjakavavin'i Sabà, afa-tsy ireo fanatitra izay mifanerana amin'ny fahambonian'ny mpanjaka toa an'i Salomona. Izay vao niverina nody any amin'ny taniny izy sy ny mpanompony.
14Ny lanjan'ny volamena tonga amin'i Salomona amin'ny indray taona, dia talenta volamena enina amby enimpolo amby enin-jato, 15afa-tsy ny azony amin'ny mpandranto sy amin'ny varotry ny mpivarotra ambongadiny sy amin'ny mpanjakan'i Arabia rehetra sy ny mpanapaka ny tany.
16Nanao ampinga lehibe roan-jato vita tamin'ny volamena voatefy Salomona, ka volamena lanjan'enin-jato sikla no lany tamin'ny isan'ampinga. 17Nanao ampinga kely telon-jato koa vita tamin'ny volamena voatefy izy, ary volamena lanjana telo mina no lany tamin'ny isan'ampinga, ka napetraky ny mpanjaka tao amin'ilay trano Alan'i Libàna ireo. 18Nanao seza fiandrianana ivoara lehibe ny mpanjaka, nopetahany volamena madio. 19Io seza fiandrianana io dia nisy ambaratonga enina, boribory ny lohany ambony amin'ny seza eo an-damosiny, nisy fitehenan-tànana ny laniny roa amin'ny fipetrahana, nisy liona roa teo akaikin'ny fitehenan-tànana, 20ary nisy liona roa ambin'ny folo amin'ny ambaratonga enina, dia enina isan-daniny avy. Tsy nisy zavatra natao toy izany na tamin'ny fanjakana inona na tamin'ny fanjakana inona. 21Ny kapoaka fisotroan'i Salomona mpanjaka, dia volamena avokoa, ny vilia rehetra tao amin'ny trano Alan'i Libàna, volamena madio avokoa. Tsy nisy volafotsy tamin'ireny, fa natao tsinontsinona izany tamin'ny andron'i Salomona. 22Fa fanampin'ny sambon'i Hirama, mbola nanana sambo any Tarsisa koa ny mpanjaka, teny ambonin'ny ranomasina; ary tonga isan-telo taona ny sambo avy any Tarsisa, mitondra volamena sy volafotsy ary ivoara, rajako sy vorombola.
23Salomona mpanjaka dia ambony noho ny mpanjaka rehetra teto an-tany, tamin'ny harena amam-pahendrena. 24Samy nitady hahita an'i Salomona avokoa ny olona rehetra, mba hihaino ny fahendrena nataon'Andriamanitra ao am-pony. 25Sady samy nitondra ny fanatiny avy, dia fanaka volafotsy, fanaka volamena, fitafiana, fiadiana, zava-manitra, soavaly, mole, isan-taona. 26Nanangona kalesy sy mpitaingin-tsoavaly Salomona, ka nanan-kalesy, efa-jato amby arivo, sy mpitaingin-tsoavaly roa arivo sy iray alina izy, ary ireo dia napetrany tao amin'ny tanàna fitoeran-kalesiny, ary tao Jerosalema akaikin'ny mpanjaka. 27Tao Jerosalema ny volafotsy nataon'ny mpanjaka ho an-kabetsahana toy ny vato, ary ny hazo sedera nataony maro toy ny amontana maniry any an-tany lemaka. 28Avy tany Ejipta no nihavian'ny soavalin'i Salomona: antokony iray tamin'ny mpandranton'ny mpanjaka no nandeha naka azy amin'ny andiany, araka ny vidiny efa nifanekena. 29Ka volafotsy enin-jato sikla no vidin'ny kalesy iray nenti-niakatra avy any Ejipta; ary dimam-polo amby zato avy kosa ny soavaly. Ary nisy nentiny nivoaka avy ao tahaka izany koa amin'ny anaran'ny tenany, ho an'ny mpanjakan'ny Heteana rehetra, sy ho an'ny mpanjakan'i Siria. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3335 seconds